Amabhantshi efriji → Izingubo zamakamelo abandayo • Imifekethiso yekhompyutha yeP & M
Amabhantshi efriji aqinisekisiwe
Imishini yabasebenzi ku- amajazi efriji ikhwalithi ephezulu, ephephile, ezinikele ekusebenzeni emazingeni okushisa aphansi yindaba ebaluleke kakhulu kubaqashi. Ukukhetha imodeli efanelekile Kuyinselele impelaikakhulukazi uma imikhiqizo enjalo inga-odwa njalo.
Esitolo sethu, sinikeza amamodeli asezingeni eliphakeme kakhulu avela kubakhiqizi abathembekile ababambe iqhaza ekukhiqizeni izingubo ezikhethekile.
Ibhantshi le-Hi-Glo 25 Coldstore, ukuvikelwa kuze kufike ku -64,2 ° C
AmaJakethi isiqandisi Lawa amamodeli atholakala ngokuhlukahluka okuhlukahlukene, okuwahlukanisa komunye nomunye ukwakhiwa, intengo nenhloso. Ngenxa yenhloso ethile yokuthunga kwabo, kusetshenziswe izinto zekhwalithi enhle kakhulu futhi kwasetshenziswa iziphetho eziqondile.
Konke lokhu ukuvikela ngokuqinile isisebenzi futhi sikhonze iminyaka eminingi. Enye yamamodeli athandwa kakhulu yijazi le-Hi-Glo 25 Coldstore elihlinzeka ngokuvikelwa kuze kufike ku -64,2 ° C (osesithombeni), enesistimu yesimanjemanje, eyizingqimba ezi-5, eyenzelwe ukubamba izingqimba eziningi zomoya.
Ijakhethi eshiwo ihlangabezana nezinga le-EN342, elenza kube lula ukulisebenzisa ezinqolobaneni ezinamazinga okushisa afinyelela ku -64,2 ° C. Kodwa-ke, imodeli yebhantshi esiyinikezayo, evikela kakhulu, ivikela ezimeni zokusebenza kuze kufike ku -83,3 ° C ngehora elingu-1 ngomsebenzi ophakathi, futhi kwehle kuye ku -44,01 ° C amahora angu-8 ngomsebenzi ophakathi.
Lawa manani asebenza uma ibhantshi nebhulukwe Ama-dungaree angama-Hi-Glo 40 agqoke ndawonye.
Ijacket yeColdstore CS-10 efrijini, ukuvikela kuze kufike ku- -25 degrees C.
Abakhiqizi bethu bagxile kwikhwalithi engcono kakhulu nasekuqedeni okuqondile. Izingubo ezihambisana nezinga le-EN 342 zihlinzeka ngokuvikelwa okuhle kakhulu emazingeni okushisa aphansi kakhulu. Ukusebenza endaweni ebandayo kubonakala ngokushisa okulingana noma okungaphansi kuka -5 ℃. Kubalulekile ukuthi ungavumeli izingubo ukuba zimanzi - umswakama noma izikhukhula zingaba nomphumela ongathandeki.
Amabhantshi efriji atholakala ngosayizi abahlukahlukene asho ukuthi ungathola kalula izingubo ezikufanela kahle. Ukuthengwa kwezingubo eziqinile kuwutshalomali olunenzuzo. Ukulandela izincomo zomkhiqizi, izosebenza iminyaka eminingi, okuqinisekiswa ngabanikazi bezinkampani ezinkulu nabasebenzisi ngokwabo.
Ijacket efrijini ye-Allegroiqhwa le-allegro kutrkakurtkaIjacket yaseColdstoreibhantshi lamazinga okushisa aphansiIjacket ye-Hi-Glo - ama-degree angama-40ijakhethi evikelayoIjakhethi ekhanyayo yamakamelo abandayoijazi lokushisa elishisayoibhantshi eliqinisekisiweamajazi efrijiamajazi efriji